Home > Uncategorized > Smart Business
MyanmarHims March 3, 2022 Uncategorized
Smart Business တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးပါသလဲ ?
Smart Business နဲ့ ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖတ်ပြီးဆွေးနွေးပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
1 . Smart Business ဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့် အရေးကြီးပါသလဲ ?
အရာရာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ IT ခေတ်ကြီးမှာဘယ်အရာမဆိုမြန်မြန် နှင့် မှန်မှန်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကအဓိကကျနေတာဆိုတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တွေကစနစ်တကျရှိနေဖို့ရန်အရေးကြီးတာမို့ Smart ကျကျနဲ့သင့်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ပြီး “Smart Business “ တခုအဖြစ်ဖန်တီးဖို့အတွက်လိုအပ်လာပြီပေါ့။
2 . မိမိတို့ ရဲ့ လုပ်ငန်း ကို “Smart Business” ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစတင်ကြမလဲ ?
“Smart Business “ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးက Communication ပါ။ ဝန်ထမ်းအချင်ချင်းအချိန် နှင့် တပြေးညီ Information တွေမပျက်သိနေကြမယ် ၊ မိမိတို့ရဲ့အဖိုးတန်လှသော Customer Information များမပျောက်မပျက်ထိန်းသိမ်းနိုင်နေပြီဆိုရင် “Smart Business “ တခုစတင်ဖို့မခက်ခဲတော့ပါဘူးနော်။
3 . “Smart Business” ကဝန်ထမ်းများရဲ့ stress ဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးပျော်ရွှင်စရာလုပ်ငန်းခွင်တခုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာရော သင်လက်ခံပါသလား ?
မိမိ တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပီး Stress တွေများနေကြရပီဆိုရင်အလုပ်တွေကအောင်မြင့်သင့်သလောက်မအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးလေ။ လုပ်ငန်း နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေ ၊ သင်ယူလေ့လာစရာတွေကို Smart ကျကျကိုယ်တိုင်လေ့လာလို့ရမယ်ဆိုရင် Stress ဆိုတာဘာလဲလို့တောင်ပြန်မေးရမယ်ထင်ပါတယ်၊၊
4 . ၂၀၂၂ မှာ ကိုယ့် Business တွေကိုဘယ်လိုပြန်စတင်ကြမလဲ ?
ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေအစားနှစ်ဆတိုးပြီး Business တွေကိုပြန်လည်စတင်ရင်း Smart ကျကျ Digital Business အသွင်ပြောင်းပြီးစတင်ကြမယ်။ Customer Information တွေကိုစနစ်တကျသိမ်းကြမယ်။ Business တခုလုံးရဲ့အခြေအနေကို အဆက်မပျက်တိတိကျကျစောင့်ကြည့်နေမယ်၊၊ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်သလို Management လုပ်မယ် ၊ Instruction ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့် Business ကအမြဲရှေ့ရောက်နေတော့မှာပါ။
ကျွန်တော် တို့ HIMS ကတော့ လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ လုပ်ငန်းကို Smart ကျကျ နဲ့ 2022 မှာ အရှိန် နဲ့ နှစ်ဆတိုးပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ System နဲ့ တခြားသောအကူအညီတွေပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။
သိချင်တာလေးတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ဖို့အတွက် Contact Us Page လေးထဲမှ Phone နံပါတ် နဲ့ Email ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။